स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा घोषित मितिमाः त्रि.वि – YesKathmandu.com
स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा घोषित मितिमाः त्रि.वि
बिहीबार ३१, भदौ २०७२
काठमाडौं, ३१ भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा घोषित मितिमा सञ्चालन गर्ने प्रष्ट्याएको छ । असोज ३ र ४ गते नयाँ संविधान जारी सँगै उत्सव मनाउन सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गरे लगत्तै त्रि.वि.को परिक्षा सर्ने हल्ला चलेको थियो ।
नयाँ संविधान जारी हुनु खुसियालीको क्षण भएता पनि असहज परिस्थिति बाहेक परीक्षा नसर्ने त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रक केशव बाँस्तोलाले जानकारी दिए । त्रि.वि.का ६० आंगिक क्याम्पस र १ हजार ५३ सम्वन्धनप्राप्त कलेजबाट परीक्षामा २ लाख २१ हजार २ सय २२ जना परीक्षार्थी सामेल हुने नियन्त्रक बाँस्तोलाले बताए ।
Saudi diplomat accused of raping2Nepali women leaves India
अकस्मात मोदीका बिशेष दुत राजनीतिक भेटघाटका लागि भोली नेपाल आउँदै
One thought on “स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा घोषित मितिमाः त्रि.वि”
Students haru lai deepawali manaunu pardaina controller jeu
जर्नादन शर्माको कुर्सीमा पशुपति र डोरप्रसादको भीडन्त
अज्ञात समूहले गोली चलाउँदा सिराहामा दुई सुरक्षाकर्मी घाइते
बस चालकको लापरवाहीले अर्काे दर्दनाक घटना
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री महरा स्वदेश फर्किए
हामीकहाँ साभ्रान्त भन्दा गाँउका विद्यार्थीको वाहुल्यता छ
सल्यानमा एमाले माओवादी भागबण्डा मिल्यो, प्रकाश ज्वाला प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीका दावेदार
ध्यु, चाकु, लड्डु खान को को पुग्दैछन शीतल निवास ?
‘अहिले न्यायालय भकभक उम्ली रहेको छ’– प्रधानमन्त्री ओली
१२ नेपालीको शव आउँदा प्रधानमन्त्री विमान स्थल पुग्ने